Tsamba kuvaHebheru 11:1-40
11 Kutenda kuva nechivimbo chekuti zvinhu zvinenge zvichitarisirwa zvichatoti zviitike,+ kuratidzwa kweuchapupu* hwezvinhu zvisiri kuoneka. 2 Nekuti nekutenda ikoko vanhu vekare vakapupurirwa nezvavo.* 3 Nekutenda tinonzwisisa kuti nyika yakarongwa* neshoko raMwari, zvekuti zvinhu zvinooneka zvakavapo zvichibva pazvinhu zvisingaoneki. 4 Nekutenda, Abheri akapa Mwari chibayiro chaikosha kupfuura chaKaini,+ uye nekutenda ikoko akapupurirwa kuti akanga akarurama, nekuti Mwari akafarira zvipo zvake,+ uye nekutenda kwake, achiri kutaura,+ kunyange zvazvo akafa. 5 Nekutenda, Inoki+ akatamiswa kuti asaona rufu, uye haana kuzomboonekwa nekuti Mwari akanga amutamisa;+ nekuti asati atamiswa akapupurirwa kuti akanga anyatsofadza Mwari. 6 Uyewo, pasina kutenda hazviiti kunyatsofadza Mwari, nekuti munhu wese anosvika kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaga nemwoyo wese.+ 7 Nekutenda, Noa+ paakayambirwa naMwari nezvezvinhu zvakanga zvisati zvaonekwa,+ akaratidza kutya Mwari, akavaka areka+ kuti aponese imba yake; uye nekutenda uku akapa nyika mhosva,+ akava mugari wenhaka yekururama kunobva pakutenda. 8 Nekutenda, Abrahamu+ paakadanwa, akateerera akaenda kunzvimbo yaaizofanira kugamuchira senhaka; akabuda, kunyange zvazvo akanga asingazivi kwaakanga achienda.+ 9 Nekutenda, akagara semutorwa munyika yaakanga avimbiswa, achiita seasiri munyika yake,+ achigara mumatende+ pamwe chete naIsaka naJakobho, avo vaizogarawo nhaka iyoyo yaakavimbiswa.+ 10 Nekuti akanga achimirira guta rine faundesheni chaiyo, rakavambwa uye rakavakwa naMwari.+ 11 Nekutenda, Sara akagamuchira simba rekubata pamuviri,* kunyange paakanga apfuura zera racho,+ sezvo aiziva kuti uya akanga amuvimbisa akanga akatendeka.* 12 Saka munhu mumwe chete aiita seafa+ akabereka vana+ vakawanda senyeredzi dzekudenga uye vasingaverengeki sejecha repamahombekombe egungwa.+ 13 Vese ivava vakafa vachitenda, kunyange zvazvo vasina kugamuchira zvakanga zvavimbiswa;+ asi vakazviona zvichiri kure,+ vakazvitambira nemufaro, vakazivisa pachena kuti vakanga vari vaenzi nevagari vari kupfuura munyika yacho. 14 Nekuti vaya vanotaura saizvozvo vanoita kuti zvioneke kuti vari kutsvaga nemwoyo wese nzvimbo yavo pachavo yekugara. 15 Asi kudai vakaramba vachifunga kwavakanga vabva,+ vangadai vakava nemukana wekudzokera. 16 Asi iye zvino vari kuvavarira kuwana nzvimbo iri nani, yakabatana nekudenga. Saka Mwari haanyari navo, kuti anzi Mwari wavo,+ nekuti akavagadzirira guta.+ 17 Nekutenda, Abrahamu paakaedzwa,+ akaita seakatobayira Isaka. Murume akanga agamuchira nemufaro vimbiso akaedza kupa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga,+ 18 kunyange zvazvo akanga audzwa kuti: “Achanzi mwana wako* achauya nekuna Isaka.”+ 19 Asi akaziva kuti Mwari aikwanisa kumumutsa kunyange kuvakafa, uye akatomugamuchira kubva ikoko nenzira yekufananidzira.+ 20 Nekutenda, Isaka akakomborera Jakobho+ naIsau+ pamusoro pezvinhu zvaizouya. 21 Nekutenda, Jakobho paakanga ava kuda kufa,+ akakomborera mumwe nemumwe wevanakomana vaJosefa+ uye akanamata akazvitsigira nemudonzvo wake.+ 22 Nekutenda, Josefa paakanga ava kuda kufa, akataura nezvekubuda kwevanakomana vaIsraeri, uye akataura zvavaizofanira kuita nemapfupa ake.*+ 23 Nekutenda, Mozisi akavanzwa nevabereki vake kwemwedzi mitatu achangoberekwa,+ nekuti vakaona kuti mwana wacho akanga akanaka+ uye havana kutya murayiro wamambo.+ 24 Nekutenda, Mozisi paakanga akura,+ akaramba kunzi mwanakomana wemwanasikana waFarao,+ 25 achisarudza kubatwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari panzvimbo pekufadzwa nechivi kwenguva diki, 26 nekuti akaona kuti kuzvidzwa kwake saKristu kwaiva pfuma huru pane pfuma yeIjipiti, nekuti akaramba achimirira nemwoyo wese kugamuchira mubayiro. 27 Nekutenda, akabva kuIjipiti,+ asingatyi kutsamwa kwamambo,+ nekuti akaramba aine chivimbo seaiona uya asingaoneki.+ 28 Nekutenda, akachengeta Paseka uye akasasa ropa, kuti muparadzi arege kuuraya* matangwe avo.+ 29 Nekutenda, vakapfuura nemuGungwa Dzvuku sevari kufamba panyika,+ asi vaIjipiti pavakazviedza, vakamedzwa.+ 30 Nekutenda, masvingo eJeriko akakoromoka pashure pekunge vanhu vaatenderera kwemazuva manomwe.+ 31 Nekutenda, Rakabhi, pfambi, haana kuparara pamwe chete nevaya vakaita zvinhu zvekusateerera, nekuti akagamuchira vasori nerugare.+ 32 Ndingaramba ndichitiiko? Nekuti nguva ichandiperera kana ndikatanga kutaura nezvaGidhiyoni,+ Bheraki,+ Samsoni,+ Jefta,+ Dhavhidhi,+ uyewo Samueri+ nevamwe vaprofita. 33 Nekutenda, vakakunda madzimambo,+ vakaita kuti pave nekururama, vakawana vimbiso,+ vakavhara miromo yeshumba,+ 34 vakashayisa moto simba,+ vakapukunyuka bakatwa,+ vakanga vasina simba vakapiwa simba,+ vakava nesimba guru muhondo,+ vakarakasha mauto aiuya kuzovarwisa.+ 35 Vakadzi vakagamuchira vakafa vavo vamutswa,+ asi vamwe varume vakatambudzwa nekuti vakaramba kusunungurwa nerumwe rudzikinuro, kuti vawane rumuko ruri nani. 36 Vamwe vaiva nemiedzo yekusekwa uye kurohwa zvakasimba, vachitosungwa necheni+ nekuiswa mumajeri.+ 37 Vakatemwa nematombo,+ vakaedzwa, vakachekwa nepakati, vakaurayiwa nebakatwa,+ vakafamba vakapfeka matehwe emakwai, vakapfeka matehwe embudzi,+ vachishayiwa, vachitambudzika,+ vachibatwa zvisina kunaka;+ 38 uye nyika yakanga isina kuvakodzera. Vakadzungaira mumagwenga, mumakomo, mumapako+ nemuninga dzepanyika. 39 Asi vese ivava, kunyange vakapupurirwa zvakanaka nekutenda kwavaiva nako, havana kuwana zvakavimbiswa, 40 nekuti Mwari akanga agara aona zvinhu zvakanaka zvaaizotiitira,+ kuti varege kuitwa vakakwana isu tisipo.
^ Kana kuti “uchapupu hunogutsa.”
^ Kana kuti “madzitateguru edu akapupurirwa nezvawo.”
^ Kana kuti “mamiriro acho ezvinhu akarongwa.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mamiriro Ezvinhu.”
^ Kana kuti “pamuviri pembeu; pemwana.”
^ Kana kuti “akavimbika.”
^ Kana kuti “akataura nezvekuvigwa kwake.”
^ ChiGir., “kugunzva.”